Manjaro 18.1.4, iyo Zvita vhezheni yatosvika neLinux 5.4 | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 18.1.4, Zvita shanduro yatosvika neLinux 5.4
Kufanana nemwedzi wega wega, iyo kambani nyowani yakabhabhatidzwa saManjaro GmbH & Co KG yakaburitsa vhezheni itsva yeinoshanda system. Sezvo vazhinji venyu vatoziva kare, izvi zvinoreva kuti ivo vakaburitsa vhezheni itsva yakagadzikana, asi izvo zvavakaunza kwatiri mifananidzo mitsva yakagadzirirwa kuiswa kutsva. Izvo zvave zviripo kwenguva pfupi zvinosvika pasi pezita re Manjaro 18.4.1, iyo inowirirana neDecember 2019 kuburitswa.
Panguva yekunyora chinyorwa ichi, ndingati iko kuvhurwa kuri semi-mukuru: vazivisa kuwanikwa kwavo uye vaburitsa zvimisikidzo zvekuburitsa zvemifananidzo mitsva, asi ivo havana kunyora chero zvinyorwa vachitaura nezve Manjaro 18.4.1 parizvino. Neichi chikonzero, irwo pfupi runyorwa rwezvakakosha zvaunazvo pazasi ndeye RC2 yeiyi vhezheni yeanoshanda system.
Manjaro 18.1.3, nyowani yakagadzikana vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu neaya nhau
Pfungwa dzeManjaro 18.4.1 (rc2)
Linux 5.4 LTS seyakadzika sisitimu. Isu tinorangarira kuti ndiyo vhezheni yekupedzisira yakaburitswa munaNovember 25.
Misoro yeManjaro yakagadziriswa.
pamac 9.2 yakazoburitswa mushanduro yayo yakagadzikana. Kana mumwe munhu akakubvunza, hongu, iri «pamac» (batanidza kune yepamutemo webhusaiti pano). Usazvivhiringidza ne "Pacman" (batanidza kune iro repamutemo peji pano uye chinyorwa nezve Pacman 5.2 pano).
Dzazvino vhezheni yePlasma (5.17.4, inowanikwa kubva Zvita 3)
Zvidiki zvigadziriso zvakaitwa mune yeGNOME vhezheni.
Mapakeji akagadziridzwa muiyo XFCE vhezheni.
Manjaro anoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa se Kutenderera Kuburitswa, zvinoreva kuti unogashira zvigadziriso zvehupenyu mushure mekutanga kuisirwa. Izvi zvinoreva zvakare kuti vashandisi varipo vanogashira kana kuti vakatogamuchira dzese Manjaro 18.4.1 nhau kubva kune yekuvandudza software inosanganisirwa neyekushandisa sisitimu. Kune avo vanoda kuisa Manjaro kekutanga kana kudzoreredza sisitimu inoshanda, iwo mavhezheni matsva ave kuwanikwa nenzvimbo. GNOME, Plasma (KDE) uye XFCE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 18.1.4, Zvita shanduro yatosvika neLinux 5.4
Maitiro ekuisa iyo rtl8812au mutyairi paManjaro? Muenzaniso weadapter yeWiFi ndeye TP-Link Archer T4UHP.
ndeipi nzira yakanakisa yekuvandudza manjaro kana iri kuburikidza neiyo terminal ndeupi mutemo wakanakisa wekumutsiridza
Pindura kuna alexis
BayStream: Iyo Pirate Bay inotibvumidza isu kuyerera nzizi uye nekugovana mhando dzese mafaera
WireGuard yakagamuchirwa uye ichave yakabatanidzwa mune inotevera vhezheni yeLinux 5.6